पीडकलाई कारबाही खै ?
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजपीडकलाई कारबाही खै ?
शुक्रबार, ०२ असोज, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, २ असोज । छिमेकीको ‘कुटपिटबाट गर्भ तुहिएपछि’ न्याय माग्दा प्रहरीले नै पञ्चायती बोलाएर कुरा मिलाउन खोजेपछि सप्तरी लौनियाकी एक महिला विलखबन्दमा परेकी छन् ।
‘मेरो गर्भमा रहेको बच्चाको के दोष ?,’ सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–२ लौनियाकी २५ वर्षीया सञ्जुदेवी मण्डलले बिहीबार दिउँसो भक्कानिँदै भनिन्, ‘मेरो तुहिएको बच्चा कसले ल्याइदिन सक्छ ?’ । गत साउन १९ को बिहान स्थानीय सफिद मन्सुरी र उनका छोरा सदिकले खेतमा गएका बेला कुटपिट गरेका कारण आफ्नो गर्भ तुहिएको उनको दाबी छ ।
टोलभन्दा पश्चिम नहरको छेउमा रहेको खेतमा लगाइएको धान बालीमा पशुचौपाया चराएको तथा बाली मासिने गरी माछा मारेको देखेपछि आफूले धान क्षति हुने गरी किन माछा मारेको भन्दा बाबुछोराले आफूलाई निर्घात कुटपिट गरेको उनको भनाइ छ । ‘जेनतेन खेतमा रोपाइँ गरेको थिएँ, धानको बोट भर्खर चलेको थियो, त्यो बेला बोट मडारिने गरी माछा मारेको देख्दा मन रोयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही विषयमा भन्दा मलाई कुटपिट गरियो ।’
जाँच गराउँदा आफ्नो गर्भ तुहिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएको उनले सुनाइन् । उपचार गरेर फर्केपछि वडाध्यक्षलगायत समाजका अगुवाहरूलाई आफूमाथि भएको अन्यायबारे सुनाइन् । वडाध्यक्षले कानुनी उपचार खोज्न सुझाए ।
गाउँमा भएका अपराध गाउँमै मिलाउन खोज्ने पञ्चायतीलाई जोड बलले छल्दै सञ्जुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा पीडकमाथि कारबाही होस् भनी उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसउपर प्रहरीले कानुनी कारबाही चलाउला भन्ने सञ्जुलाई लागेको थियो । तर, त्यसविपरीत प्रहरीले नै पञ्चायती गुहारेपछि न्याय पाउने उनको आसमा बज्रपात भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ